I-Wingstop Franchise Cost v. Competition - Wayback Burgers
Izindleko ze-Wingstop Franchise v. Competition
Uma ufuna ukuthenga i-franchise yokudla, kubalulekile ukuqonda zonke izimali nezindleko ezihilelekile. Funda ukuthi i-Wingstop iqhathaniswa kanjani nezimbangi zayo.
I-Wingstop yokuqala yasungulwa ngo-1994, kwathi ngenxa yokukhula kokuthandwa kwamaphiko ezinkukhu, inkampani ephethwe ezimele yaqala ukwenza ama-franchising ngo-1998. Kusukela ngo-2020, kunezindawo ze-Wingstop ezingu- 1,436 , eziningi zazo eziphethwe yi-franchise I-united states.
Amakhasimende athanda i-Wingstop ngenxa yokunambitheka kwamaphiko awo, okuhlukile kumkhiqizo futhi enziwe ngamarisiphu obunikazi. I-Wingstop iphinde igxile kakhulu ekuqhubeni ibhizinisi eliqinile lokukhipha impahla phezu kokuba khona kwezitini nodaka, yingakho izitolo zabo eziningi zincane kunendawo yokudlela evamile esheshayo. Kanye nemenyu egcwele yezinketho zenkukhu nezinhlangothi, ezinye izindawo ze-Wingstop zinelayisensi yokuthengisa ubhiya newayini futhi.
Isamba sezindleko ze-Wingstop franchise ziyahlukahluka phakathi kwama-$376,300 kuya ku-$724,000, ngemali yokuqala ye-franchise engu-$30,000. Noma ngabe wakha indawo entsha noma uthenga indawo edinga ukulungiswa noma ukuthuthukiswa, i-Wingstop idinga abangaba abanikazi bama-franchise ukuthi babe nemali etholakalayo engu-$600,000 kanye nesamba semali okungenani engu-$1.2 million. Uma usuvulile, i-Wingstop icela amaphesenti angu-6 ezinkokhelweni zasebukhosini namaphesenti angu-4 okukhangisa ekuthengisweni kwamasonto onke. Kusukela ngo-2020, i-Wingstop iphinda idinga iphesenti elingu-1 lemali yokukhangisa yasendaweni neyokukhangisa.
Lapho uhlola amathuba e-Wingstop franchise, khumbula ukuthi ungakhetha kuphela ukuthuthukiswa kwezitolo eziningi okunamayunithi amathathu okungenani.
Futhi zidinga ukuphathwa kwendawo yokudlela yamayunithi amaningi kanye nolwazi lokuthuthukiswa, ngokuncamela okunamandla kobunikazi bangaphambilini be-franchise. Ukwengeza, izivumelwano ze-franchise ne-Wingstop zihlala isikhathi okungenani iminyaka eyi-10. Ngokungeziwe ezinkokhelweni zokuqala zokutshala, isamba sezindleko ze-Wingstop franchise futhi sidinga imali yokuthuthukisa engu-$10,000 isitolo ngasinye, okungenani ezitolo ezintathu.
I-WINGSTOP PROS NE-CONS
Kunobuhle nobubi obujwayelekile obuhlukahlukene bokuvula i-franchise yokudlela, kodwa ezinye ziqondene ngqo nalolu hlobo. I-Wingstop iqinisekisa ukuvikeleka kwendawo ethile, ikuvikela ekubhekaneni nomncintiswano wamanye ama-franchise avula emakethe yakho futhi isongela umgomo wakho oyinhloko. Futhi njengoba i-Wingstop yenza ingxenye enkulu yebhizinisi labo ku-inthanethi, ungase udinge ukuqasha abasebenzi abambalwa ukuze ugcine ibhizinisi lakho lisebenza.
Imenyu ye-Wingstop icacile futhi inomkhawulo okuthi, ngenkathi yenza imisebenzi yabanikazi ibe lula, ingase ikhawulele isikhalazo kuhlu olubanzi lwamakhasimende. Uma kuqhathaniswa namanye ama-franchise aqhudelanayo, izinkokhelo zakho kokubili ukumaketha nokukhangisa zengeza kumaphesenti aphezulu. Ukwengeza, ubuncane bezitolo ezintathu nokuthandwayo kubunikazi bangaphambilini bamayunithi amaningi kungase kusebenze njengesivimbelo kubathengi bezindawo zokudlela abangenalwazi noma abangaba abatshalizimali abafuna ukuzibophezela okulula.
I-Wayback Burgers yasungulwa ngomgomo wokuhlinzeka amakhasimende alambile ama-burger amnandi kakhulu, izinhlangothi, nokunyakazisa okwenziwe ngesandla ukuze bajabulele ukunambitheka kwabo futhi bahlale bebuya ukuze bathole okwengeziwe. Kusukela ngo-1991, i-Wayback Burgers ibiheha abanikazi bama-diner nabanikazi bama-franchise emhlabeni jikelele.
Izivakashi ziphendukela ku-Wayback Burgers ukuze bathole indlela yethu eyiqiniso nengeyona inkimbinkimbi yokudla, futhi osomabhizinisi abazinikele bakhetha i-Wayback Burgers ngemodeli yethu esekelayo nephelele ye-franchise.
Ngemali yokuqala ye-franchise engu-$35,000 kanye nesamba sokutshalwa kwezimali esilinganiselwe phakathi kuka-$350,000 no-$450,000, i-Wayback Burgers inikeza uhlobo lokusekelwa, ukuqeqeshwa, nokukhula amanye ama-franchise angakunikezi. Njengenye yama- franchise ahamba phambili embonini yezokudlela, i-Wayback Burgers inikeza abanikazi ukwesekwa okusezingeni lomhlaba ngokuqeqeshwa, ngosizo lokumaketha ama-burger franchise kanye nokufinyelela kunethiwekhi ephumelelayo yochwepheshe nezingcweti ezinomqondo ofanayo.
Ngokugxila okukabili ezivakashini nakubanikazi bama-franchise, u-Wayback Burgers umi ngaphezu komncintiswano njengethuba le-franchise elibeka kuqala ukwenza ukudla okuhle nezinkumbulo ezinhle ngenkathi sisebenzela imiphakathi yethu.
Sivakashele namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana namathuba okuthenga ngemali nge-Wayback Burgers.